Real Madrid oo dhigeeda Liverpool u bandhigeysa qorshe layaab leh oo laba ciyaartoy lagu kala badalanayo – ma isku qalmaan? – Gool FM
Real Madrid oo dhigeeda Liverpool u bandhigeysa qorshe layaab leh oo laba ciyaartoy lagu kala badalanayo – ma isku qalmaan?
Abdirashid Mohamud July 1, 2019
(Madrid) 1 Luulyo 2019. Real Madrid ayaa wada qorshe cajiib ah oo ay ku dooneyso iney ku hesho Sadio Mane oo ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Liverpool, sida ay qoreen warbaahinta Ingiriiska kooxda caasimadda ka dhisan waxey dooneysaa iney Marco Asensio u adeegsato helitaanka xiddiga reer Senegal.
Marco Asensio ayaa muddo badan lala xiriirinayay Liverpool, balse qiimahiisa oo ku dhaw 100 Malyan oo Pound ayaa keentay in tababare Juren Klopp uu isaga haro doonista xiddigaan.
Express ayaa lagu qoray in Reds lasiin doono fursad ay kula saxiixato Marco Asensio, balse waa hadii ay ogolaato iney iska soo wareejiso mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan.
Sadio Mane wuxuu la wadaagay kabta dahabka gooldhalinta Premier League labada ciyaartoy oo ay isku qaarada kasoo jeedaan Aubemayang iyo Mohamed Salah maadaama uu dhaliyay 22-gool, balse sinaba Klopp ma doonayo inuu lumiyo xiddigii hore Saint.
Asensio ayaa la adeegsady 44 jeer fasalkii lasoo dhaafay, kaliya 6-gool ayuu dhaliyay 7-jeerna caawinaad ayuu sameeyay.
Miyey Liverpool albaabka u fureysaa soo laabashada Xiddigoodii hore Philippe Coutinho? Xog xasaasi ah.
TV laga leeyahay dalka faransiiska oo niyad jabiyay jamaahiirta Barcelona ee sugaya soo laabashada Neymar Junior.